Cross Roller nojantshi - China WY Precision
Ball Intulo Nuts
I-Miniature Ball nojantshi
Cross Roller nojantshi
Nut Ukuzungelezisa Ball Izikulufu
Cross Roller nojantshi Asikwazi ukuklama, ukukhiqiza futhi unikele ejwayelekile futhi ngokwezifiso engu- roller nojantshi. Ukuthuthukiswa Ball nojantshi Linear Ball nojantshi yakhiwa ezimbili babe V-like inkatho Umhlahlandlela, roller yezinyoni, roller ibhola nokunye, Uhamba phambili nemuva ngokushelela kwi ukunemba ukugaya V inkatho ebusweni, eningakuthwala komthwalo osindayo ukuqhuba ngokunemba high, bushelelezi ukunyakaza komugqa. Roller Umhlahlandlela roller Cross nojantshi yakhiwa ezimbili emzileni ngilugweda-convex nge 90 - degree engela yezinyoni, r cylindrical ...
Asikwazi ukwakha, ukukhiqiza futhi unikele ejwayelekile futhi ngokwezifiso engu- roller nojantshi.
Ukuthuthukiswa Ball nojantshi
Ukuthuthukiswa Ball nojantshi yakhiwa ezimbili babe V-like inkatho Umhlahlandlela, roller yezinyoni, roller ibhola nokunye, Uhamba phambili nemuva ngokushelela kwi ukunemba ukugaya V inkatho ebusweni, eningakuthwala komthwalo osindayo ukuqhuba ngokunemba high, bushelelezi ukunyakaza komugqa .
Cross roller nojantshi yakhiwa ezimbili emzileni ngilugweda-convex nge 90 - degree engela yezinyoni, roller cylindrical. Uhamba phambili nasemuva phezu ukugaya orbit convex. ngoba obukhulu cylindrical roller, okuyizinto ezibangela bona ngokunemba high, komthwalo osindayo, bushelelezi ukunyakaza komugqa.
1. ngomshikisho okuphansi, ukuzinza Good
2. Small isiqalo friction, okusezingeni eliphezulu ngokushelela
3. ukuqina okusezingeni eliphezulu nomthwalo omkhulu amakhono
4. Nezimo isakhiwo design and ukufakwa lula
standard Japanese, Switzerland ejwayelekile, Okungenasimiso-international (imidwebo egcizelele)
Okulandelayo: I-Miniature Ball nojantshi
Ball Linear nojantshi